အဝါနှင့်လိမ္မော်ရောင် စပ်ထားသော နှုတ်သီး၊မျက်လုံးအထက်မှ အမွေးပေါက်ငယ်လေးများတို့ဖြင့် အမြင်မမှားနိုင်သော ငှက်တစ်ကောင် - ONE DAILY MEDIA
သဘာဝတွင် အမြင်မမှားနိုင်သော ငှက်များစွာရှိပါတယ် ။ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသည့် ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့် မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ် ။ အချို့သောသူများက ထိုကဲ့သို့ ထင်ရှားသောငှက်များသည် နတ်သမီးပုံပြင်စာအုပ်များမှ ခုန်ထွက်လာသည်ဟုပင် ထင်ကြပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် သဘာဝတွင် တကယ် ရှိနေပါတယ် ။
ဒီလို ထူးထူးခြားခြား လေထဲပျံဝဲနေတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို မြင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ထိုအခွင့်အရေးကို သေချာဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပါ။
Horned Puffin ဟုခေါ်ဆိုသော ဦးချိုပါရှိ‌သည့်ပင်လယ်ပျော်ငှက်သည်လည်း ဤထူးခြားသောငှက်များကြားတွင် ပါဝင်ပါတယ်။တောက်ပသော အဝါရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင် နှုတ်သီးတို့ဟာ ငါးဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို ၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များဆီသို့ သယ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကျော်ကြားပါတယ်
ကြည့်လိုက်ပါ !! အနက်ရောင်နှင့် အဖြူရောင် စပ်ထားသော ပင်လယ်ငှက်၏ မျက်လုံးများဟာ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ မျက်လုံးအထက်တွင် အမဲစက်လေးများပါရှိပြီး ငှက်အုပ်များကြားမှ ထင်ရှားပေါ်လွင်စေသယပါတယ်။
ဤအင်္ဂါရပ်များကြောင့် ပင်လယ်ပျော်ငှက်ကို “လူရွှင်တော်ငှက်” ဟုလည်း ချစ်စနိုး အမည်တစ်မျိုး ပေးကြပြန်ပါတယ် ။သင် သဘောတူပါသလား?
ပင်လယ်ပျော်ငှက် မျိုးစိတ်များအားလုံးတွင် အကြီးဆုံးသောနုတ်သီးများရှိခြင်းက ငါးဖမ်းရာတွင် များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ် ။ ၎င်းတို့သည် ငါးငယ်များကို လိုက်ဖမ်းရန် ပေ 100 ကျော်အနက်ထိ ရေငုပ်နိုင်ပြီး ငှက်ပေါက်များကို အစာကျွေးရန်အတွက် ပါးစပ်အပြည့်သယ်ဆောက်လာနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင် မျိုးပွားရာသီတွင် အမများကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် အထီးများက ၎င်းတို့၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် နုတ်သီးများကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ နုတ်သီးဟာ ပိုကြီးလာပြီး လိမ္မော်ရောင်ထိပ်ဖျားကြောင့် အဝါရောင်ကပိုမို တောက်ပလာပါတယ်။
အဖော်ရှာပြီးနောက် အချို့ငှက်အမများသည် ချောက်ကမ်းပါးများပေါ်တွင် အသိုက်ဆောက်ကြပြီး အခြားသော ပင်လယ်ပျော်ငှက် မျိုးစိတ်များ၏ အမများက ၎င်းတို့၏အသိုက်အတွက် မြေတွင်းများကို တူးကြပါတယ်။
ဆောင်းရာသီရောက်သောအခါ ဤပင်လယ်ပျော်ငှက်များသည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိ ကမ်းစပ်များမှာ ပျံသန်းကြပါတယ်
ဒီလိုထူးခြားသောငှက်လေးကိုနှစ်သက်ပါက ဤဆောင်းပါးကို သင်၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများထံ မျှဝေ ပေးလိုက်ပါ။ သေချာပေါက် “ဝိုး” ဟု အံ့ဩသံထွက်လာပါလိမ့်မယ်။